मुलुक लिच्छवी कालमा प्रवेश गर्दैछ
Published: December 4, 2015 12:57 PM
पेशल आचार्य । भारतीय नाकाबन्दीले देशैभरि एकाएक चरम् इन्धनसमस्या भएपछि सरकारले दाउरा बेच्न थाल्यो । मुलुकभरि नै दाउरा बेच्ने सुकार्यको थालनी गर्ने यो सरकारले संसारलाई मुलुक मल्ल कालहुँदै लिच्छवी कालमा प्रवेश गरेको जानकारी दिएको छ । धूँवा असरले सहरी क्षेत्रका वासिन्दाहरूमा स्वास प्रस्वाशको समस्या ह्वात्तै देखापरेको छ । विडम्बना अहिले...
सत्ता कब्जाले मात्र देशको अस्तित्व जोगिएला ?
Published: December 2, 2015 13:02 PM
हरिविनोद अधिकारी-पहिले पहिले लाग्थ्यो– किन होला अमेरिका, तत्कालीन सोभियत संघ, चीन, इजरायल, भारत, कोरिया र पाकिस्तानले आफ्नो सैन्य शक्तिका लागि त्यत्रो खर्च गरेका होलान् र सेनाको संख्या बाहिर भनेकोभन्दा बढी नै तयार किन गरेको होला ? किन आणविक शक्तिका लागि मरिहत्ते गरेका होलान् ? किन अहिले उत्तर कोरियाले आफूलाई आणविक शक्तिको...
एउटा साँझ मोदीको नाम
रेवती प्रसाद भुसाल – महामहिम नरेन्द्र दामोदरदास मोदी जी,आज तपाईलाई सम्बोधन गरेर लेख्न मन लाग्यो । यसकारण पनि हो कि हामीहरुका धार्मिक सांस्कृतिक परम्परा एउटैजस्ता छन्, संस्कार फरक भए तापनि । आज पनि हामी नेपाली हिन्दुहरु कुनै धार्मिक वा पुण्य कार्य गर्दा ‘जम्वुद्विपे भरतखण्डे आर्यवर्तैक देशान्तरगते नेपाल देशे.............’...
Published: November 26, 2015 18:20 PM
नरेन्दराज पौडेल - “सानो गल्तीमा पनि बारम्बार दुःख दिने शत्रुहरु सदासर्वदा बाँचीरहुन, जसले मलाई सन्मार्गमा चल्ने बाटो देखाइरहनेछन । ”महाभारतको कुनै एक प्रसङ्गमा युधिष्ठिरले भनेका थिए । मध्ययुगीन शक्तिशाली राजारजौटाहरुकोलागि त्यो कुरा सत्य पनि होला । तर पल्लो गोठको अर्नाले ओल्लो गोठको बाच्छालाई तीखा सिङ उज्याएर बारम्बार...
देश, नेता र राजा
नरेन्द्रराज प्रसाई - २०४६ सालदेखि नेपाल तल ओर्लेको ओल्र्यै छ । भारतकै पहलमा नेपालमा त्यसैसाल बहुदलीय प्रणाली आएको थियो । प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास भन्दाभन्दै सबै कलकारखाना बेचेर नेपाललाई नाङ्गो पार्ने काम प्रजातन्त्रबाटै भयो । अनि त्यसैमाझ माओवादी जनयुद्ध पनि चम्क्यो र त्यही कारण पनि जोडिदा मुलुक छियाछिया भयो । अन्तत भारतकै प्रत्यक्ष साथ पाएर गणतन्त्र नेपालमा...
‘पेण्डोरा बक्स’ र राजनीतिक ‘महापञ्चक’
Published: November 24, 2015 19:25 PM
पेशल आचार्य- विश्लेषकहरुले ‘पेण्डोरा बक्स’ उपमा दिएको ‘नयाँ संविधान’ जारी भएपछि मुलुकमा करिब दुई महिनादेखि विद्यमान् बहुआयामिक नाकाबन्दीले ‘कालो अर्थतन्त्र’ को गोमनफँडा एकाएक उठाउँदा देश नै धरापमा परेको छ । उता मधेश आन्दोलन र सार्थक वार्ताको नौटङ्कीबीच सरकार गठनका परिदृश्यहरुमा मुलुकीले अकल्पनीय...
भारतले चाणक्यलाई किन नसम्झेको होला ?
Published: November 24, 2015 13:03 PM
आदित्यमान श्रेष्ठ-नेपालमा जारी गरिएको नयाँ संविधानले नेपालीहरु बीचमा मात्र खलबली ल्याएको छैन, यसले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई बिगारेको पनि छ । फलस्वरुप नेपालीहरुले बन्द, हड्ताल, जुलुस, नाकाबन्दी, कालाबजारी आदि अनेक दुःख पाइरहेका छन् । सबै पक्षको भनाई र गराईलाई केलाउँदै जाँदा नेपालीहरुले दुःख पाइरहनुपर्ने कुनै कारण देखिदैंन...
देश नै रहेन भने नि ?
Published: November 22, 2015 17:53 PM
हरिविनोद अधिकारी-नयाँ संविधानको कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका सत्ता समीकरणको प्रक्रियालाई हेर्दा लाग्छ—सत्ता यस्तो चिज रहेछ, जुन प्राप्त गर्नका लागि जे पनि गरिँदो रहेछ । जस्तोसुकै कुकर्म पनि पाच्य मानिँदो रहेछ । आफ्ना बचनको आफैँले अवमूल्यन गर्नुको अर्थ पनि सत्ताको स्वाद नै होला । अर्कोले गल्ती गर्‍यो भनेर त्योभन्दा...
प्राकृतिक विपदमा जापानी संचारमाध्यमको भूमिका
Published: November 22, 2015 08:00 AM
ठाकुर बेलबासे- जापानको मोरियोकास्थित आइबीसी टेलिभिजनका समाचार प्रमुख खाना हिरा भन्छन्, ‘प्राकृतिक विपद् डरलाग्दो हुन्छ । भूकम्प, सुनामी, बाढी–पहिरोले गर्ने बिध्वंस अझ पीडादायक र त्रासदीपूर्ण हुन्छ । विपद् आइलागेका बेला सबैले कुरा गर्छौं । तर बिस्तारै भुल्दै जान्छौं । प्राकृतिक विनासका बारेमा सँधै सचेत हुनु पर्छ ।...
चम्चे बौद्धिकता छाँटेर कसको मानो भर्दैछौ ?
Published: November 13, 2015 19:23 PM
भरत दाहाल-भारतीय एजेन्टहरु र डलरे बुद्धिजिवीपछि अब कांग्रेसका स्वनामधन्य बौद्धिकहरुले आफ्नो फाईदाका लागि तराइ समस्या समाधानको प्रश्नलाई गलत ढंगले उछाल्न थालेका छन् । इतिहासमा सर्वप्रथम यो भूमिका माओवादी वृत्तले खेलेको थियो । दिल्लीको धापले यस्ता तत्वको मष्तिष्कमा नशा चढेपछि मुखबाट निरस आवाज निस्कन्छ— ‘मधेशलाई सम्बोधन...
सार्कको औचित्य के हो ?
Published: November 9, 2015 14:01 PM
पेशल आचार्य - छिमेकी ‘पर्दाका जन्ती र मर्दाका मलामी’ भन्ने नेपाली उखान पुरानो हो । पुरानै भए पनि उखानमा दम छ । हामी चाहेर पनि छिमेक र छिमेकी फेर्न सक्दैनौं । तर अहिले छिमेकीले गरेको व्यवहारबाटै नेपालीले चरम् दुःख भोगेका छन् । यी सबै किन र कसरी भए सचेत नेपालीमा जगजाहेर भैसक्या छ । मानिस भावना र विश्वासमा चलेको प्राणी हो...
युद्धको अन्तिम हतियार नाकाबन्दी , के भारतले नेपालसंग युद्ध गर्दै छ !
Published: November 7, 2015 19:35 PM
ठाकुर बेलवासे - भारतले दुई महिनादेखि जुन किसिमको नेपाल विरुद्ध नाकाबन्दी गरेको छ । दुई देशका बीचको युद्ध चरम विन्दुमा पुगेका बेला शत्रु देशलाई तहसनहस पार्नका लागि प्रयोग गरिने युद्ध रणनीति हो – नाकाबनदी । अझ नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित सानो , शान्त र गरिब मुलुकलाई यति लामो नाकाबन्दी लगाउनुले भारतले आफ्नो शक्तिशाली शत्रुराष्ट्रसंग अन्तिम युद्ध लडेको जस्तो...
मक्किएको नेपाली राजनीति र ‘किङ मेकर’को अभाव
Published: November 3, 2015 12:21 PM
पेशल आचार्य - गत असोज ३ गते संविधान सभामा ‘हुन्छ÷हुँदैन’ को म्याराथन गर्दै करिब नब्बे प्रतिशत सभासद्को समर्थन रहेको भन्दै पारित भएको संविधान युवा ‘ड्रिम’ अनुसार हुन सकेन भन्ने सुन्नमा आयो । कार्यान्वयनमा अब ‘सिसिफस यत्न’ जो देखिँदै छ । फेरिनु...
अनुत्तरदायी नेपाली राजनीति
Published: November 1, 2015 14:35 PM
आनन्दराम पौडेल - इतिहासको लामो कालखण्डभरी सधैं प्रश्नहरु यथावत रहन्छन्, केवल उत्तरमात्र फेरिईरहेका हुन्छन्। तर, नेपालमात्र यस्तो अपवाद भयो जहाँ उत्तर पनि फेरिएनन्। २७ २८ बर्षदेखि नेपाली जनताले जिज्ञाशा राखिरहे, तर जहिलेपनि प्रश्नलार्इ दरीमुनि लुकाइयो। नमुनाको लागि जनताका जिज्ञाशा यस्ता थिए– २०४५–०४६ सालमा भारतले नेपाललाइ १३ महिना नाकाबन्दी गर्यो।...
सत्ता गठबन्धनको षडयन्त्र
Published: November 1, 2015 14:34 PM
हरिविनोद अधिकारी - नयाँ संविधान कार्यान्वयन क्रमको पहिलो चरण समाप्त भएको छ । ७ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन, २० दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन, ३० दिनभित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने संक्रमणकालीन प्रावधान थियो । त्यसको सफल कार्यान्वयनलाई हालको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले सफलताका साथ सम्पन्न गर्नका...